လေနုအေး: May 2008
ကျွန်မနဲ့လေနုအေး
မနေ့ က ကျွန်မမောင်လေးက ဖုန်းဆက်မေးပါတယ်။ ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေblogမှာ တင်ထားတဲ့ အရှုပ်ထုပ်(လေနုအေး)ဟာ ကျွန်မလားတဲ့။ ဒီနေ့ လဲ သူငယ်ချင်း ၃၊၄ ယောက်လောက် ကျွန်မကိုမေးလာကြလို့ဒီpostလေးနဲ့ ရှင်းပြပါရစေ။
ကျွန်မရဲ့ blogနာမည်သာ “လေနုအေး"ဖြစ်ပြီး ကျွန်မရဲ့ ကလောင်နာမည်မှာ “တန်ခူး”ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေblogမှာ တင်ထားတဲ့ ကဗျာရေးသူ လေနုအေးဟာ ကျွန်မ မဟုတ်ပါကြောင်း အသိပေးပါရစေ။ လာလည်ဖတ်ရှုအကြံပေးသူများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
Posted by တန်ခူး at 1:21 PM7comments:
ကျောက်သင်ပုန်းပေါ်ရေးမှတ်လိုက်သော ကျူပ်နာမည်ကိုတွေ့ တော့ ဒေါသထောင်းကနဲထသွားသည်။ ဆရာမက အလုပ်ရှပ်နေ၍ အတန်းမဆူအောင် အတန်းခေါင်းဆောင် ၀င်းမြင့်ကို နာမည်မှတ်ခိုင်းခဲ့သည်။
“ဟေ့ကောင်…ငါစကားမပြောပဲ ငါ့နာမည်ဘာလို့ မှတ်တာလဲကွ”
“မင်း အောင်အောင်ကို စကားပြောလိုက်တာ ငါမြင်တယ်”
“ဘာကွ…အောင်အောင်က ငါ့ကို စကားပြောလာပြောတာ..ငါဘာတခွန်းမှပြန်မပြောဘူး…
မင်းမျက်လုံးကန်းနေလဲ နာမည်မှတ်မနေနဲ့ ”
မခိုးမခန့် ပြုံးလိုက်တဲ့ ၀င်းမြင့်မျက်နှာကို စုတ်ပြတ်သွားအောင် ဆွဲထိုးပစ်ချင်သည်။ တတန်းလုံးက ငြိမ်သက်စွာ အကဲခတ်နေသည်။ ပိုက်ဆံချမ်းသာ၍ သုံးနိုင်ဖြုန်းနိုင်သော အောင်အောင်ကို မျက်နှာလုပ်ချင်လဲ မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်နေပေါ့။ ဘာလို့ အပြစ်မရှိတဲ့ ကျူပ်ကို ဆွဲထည့်လဲ။
“ ၀င်းမြင့်…ခုချက်ချင်း ငါ့နာမည်ကို ဖျက်ပေး”
လက်သီးတွေယားလာသည်။ ဒီကောင် သိသိကြီးနဲ့ကျူပ်ကိုလုပ်ပြီ။ ၀င်းမြင့်ကို မကြောက်သူဆိုလို့တတန်းလုံးမှာ ကျူပ်တယောက်ထဲရှိသည်။ တရားခံအစစ် အောင်အောင်က အမှန်ဝန်ခံဖို့ ဝေးစွ အပြစ်မရှိသလိုဟန်ဆောင်နေသည်။
“အေး…ငါဆိုတဲ့ကောင်က ကိုယ်လုပ်ရင် ကိုယ်ခံရဲတယ်ကွ… ကိုယ်မလုပ်ပဲနဲ့ တော့ငြိမ်မခံဘူး”
တတန်းလုံးမှာ စာအတော်ဆုံး၊ စည်းကမ်းလိုက်နာဆုံး ကျူပ်မှာ နာမည်ဆိုးဆိုလို့မဟုတ်မခံသွေးဆူတာပဲရှိသည်။ ၀င်းမြင့်အမေ ပိုက်ဆံအိတ်တလုံးနဲ့ဘယ်လောက်လိုက်လိုက် အချိန်တန်ရင် ကျူပ်က ပထမ။ အဖေ့က ဆိုက်ကားနင်း၊ အမေက ပဲပြုတ်ရောင်းသည့် ကျူပ်လိုမျက်နှာမွဲက ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးကတောင် အသိအမှတ်ပြုရအောင် စာတော်သူဆိုတော့ ၀င်းမြင့်က မနာလို။ အခါပေါင်းများစွာ ပြဿနာရှာခဲ့ဘူးသည်။
ကျူပ်က ပြောပြောဆိုဆို ကျောက်သင်ပုန်းပေါ်ရေးမှတ်လိုက်သော ကျူပ်နာမည်ကို သွားဖျက်သည်။ ၀င်းမြင့်က ပြန်ရေးသည်။ ကျူပ်ကဖျက်၊ ၀င်းမြင့်ကရေးနှင့် အကြိတ်အနယ်ဖြစ်နေချိန် မောင်မောင် အသံကြောင့် နှစ်ယောက်လုံး နောက်လှည့်ကြည့်မိကြသည်။
မောင်မောင်က ကျူပ်တို့ နောက်လိုင်းမှာ ထိုင်သူ။ ကျူပ်စကားမပြောဘူးဆိုတာ သူသေသေချာချာသိသည်။ ဒါကြောင့် မောင်မောင်စကားကို ကျူပ်စိတ်ဝင်တစား နားထောင်မိသည်။
“၀င်းမြင့်လဲမမှားဘူး…ထွန်းထွန်းလဲမမှားဘူး…၀င်းမြင့်ကလဲ ဆရာမ နာမည်မှတ်ခိုင်းလို့မှတ်တယ်…သူ့ အလုပ်သူလုပ်တယ်…ထွန်းထွန်းစကားပြောတာသူမြင်တယ် ထင်လို့ သူမှတ်တယ်…ထွန်းထွန်းကလဲ သူစကားမပြောတော့ ၀င်းမြင့်ကိုပြန်ပြောတယ်…အဲဒီလို မဆုံးနိ်ုင်အောင်ငြင်းနေရင် ပြဿနာက မဖြေရှင်းနိုင်ပဲ ဒီမှာပဲရပ်တန့် နေတော့မှာပေါ့…ဒီတော့ ထွန်းထွန်းက ၀င်းမြင့်နာမည်မှတ်တာကို ခဏစောင့်ကြည့်ပြီး ဆရာမလာရင် ဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ အဖြေစောင့်လိုက်တာ မကောင်းဘူးလား”
မောင်မောင်စကားဆုံးတော့ ကျောက်သင်ပုန်းပေါ်က ကျူပ်နာမည်ကိုဖျက်၊ ၀င်းမြင့်ထပ်မရေးနိုင်အောင် လက်သီးတလုံးကျွေး၊ ကြားလူလိုလိုနဲ့သေတွင်းပို့ ပေးသည့် ဥာဏ်ကြီးရှင်မောင်မောင်ကိုပါ လက်သီးတလုံးချီးမြင့်လိုက်သည်။
ဆရာမကြိမ်လုံးဒဏ်ကို ၀င်းမြင့်နှင့် မောင်မောင်ပါးပေါ်က လက်သီးရာလေးတွေကြည့်ရင်း ပြူံးပြုံးကြီး ခံခဲ့ပါသည်။ ရလဒ်ကတော့ ထိုနေ့ မှစ၍ ၀င်းမြင့် ကျူပ်အပေါ်မတရား လူပါးမ၀ရဲတော့သလို မောင်မောင်ကတော့ ကျူပ်ကိုမျက်နှာချင်းမဆိုင်ဝံ့တော့ပါ။
Posted by တန်ခူး at 12:14 PM6comments:
တဘ၀၊ နှစ်ဘ၀ မဟုတ် … ဘ၀တရာ၊နှစ်ရာလဲမက…ဘ၀တသောင်း၊နှစ်သောင်းထက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုတဲ့ဘ၀တွေ…အသက်ရှင်လျှက်ပျောက်သွားရပြီ… တကယ့် ဗလာသက်သက်…ဘာဆိုဘာမှ မရှိ…ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အိမ်၊ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ယာ၊ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှူအားလုံး…တချို့ ကအဖေလို့ ခေါ်စရာမရှိ၊ တချို့ ကအမေလို့ ခေါ်စရာမရှိ၊ တချို့ ကအဖေရောအမေရောခေါ်စရာမရှိ…ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့မိသားစုတွေ… …ဒဏ်ရာဗလပွနဲ့ နှလုံးသားတွေ…ကုန်းကောက်စရာမရှိတဲ့ 
ချို့ တဲ့မှူတွေ…ဒီဘ၀ပေါင်းများစွာ ပြန်လည်ထူမတ်ဖို့ က အချိန်အင်အား၊ လူအင်အား၊ ငွေအင်အား တွေနဲ့ ရေရှည် ဆောင်ရွက်ရမှာမို့ကောက်ရိုးမီး အလှူနှင့်မလုံလောက်ပါ။ တတ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာ ကနေ အချိန်၊ လူ၊ ငွေ လှူကြပါ။ လှူပြီးရင်လဲ ထပ်လှူကြပါ။ အသက်ငင်နေတဲ့ ဘ၀တွေ ကယ်တင်ရတာဟာ အလွန်မြတ်တဲ့ ဇီဝိတဒါနအလှူမို့တခါနဲ့ ရပ်တန့် မနေပဲ အခါပေါင်းများစွာ လှူုကြူဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်….။
Posted by တန်ခူး at 10:37 AM7comments:
သင့်ဘ၀ရဲ့ မြင့်မြတ်မှုဖြစ်တယ်…။
Posted by တန်ခူး at 10:38 AM 12 comments:
တနေ့ တခြားတိုးလာသော လူအသေအပျောက်စာရင်းကို နားထောင်ဖတ်ရှူရတိုင်း သက်ပြင်းမောတွေနဲ့အိပ်မပျော် စားမ၀င်။ တယောက်ထဲညဘက်တွေ အိပ်မပျော်တိုင်း ဘယ်လိုများ ဒီ့ထက်ထိရောက်အောင် ကူညီနိုင်မလဲဆိုတာ brain stormingလုပ်ကြည့်မိသည်။ ဒီမှာပဲ မြန်မာပြည်မှာ ရှိစဉ်က တခြားရပ်ကွက်တခုခု မီးလောင်လျှင် ကျန်ရပ်ကွက်တွေက ထမင်းထုတ်ပို့ ရသည့် အလေ့အထလေးကို သွားသတိရမိသည်။
မြန်မာပြည်တွင် တိုင်းနယ်၊ပြည်နယ် (၁၄)ခုရှိသည်။ မုန်တိုင်းဘေးခံရသည်မှာ တိုင်းနယ်၊ပြည်နယ် (၄)ခုဖြစ်သည်။ ဒီတော့ မီးဘေးသင့်ခံရသည့်ရပ်ကွက်တခုကို တခြားရပ်ကွက်တွေမှ ထမင်းထုတ်ပို့ သလို မုန်တိုင်းဘေးခံရသည့်တိုင်းနယ်၊ပြည်နယ် (၄)ခုကို
ကျန်တိုင်းနယ်၊ပြည်နယ် (၁၀)ခုမှ တတ်အားသရွေ့ ကူညီနိုင်လျှင် အတော်ထိရောက်လိမ့်မည်။ ငွေအားတတ်နိုင်သူက ငွေအား၊ လူအားတတ်နိုင်သူက လူအား တတ်စွမ်းသမျှ အချိန်မှီ ကူညီနိုင်လျှင် မြတ်သောအလှူပင်။
ကူညီဖို့ ဆိုတာ အပြင်ကထိုင်ပြောတာလွယ်သလောက် လက်တွေ့ မှာ အခြေအနေ၊ အတိုင်းအတာ၊ အခွင့်အလမ်း…စတဲ့အခက်အခဲတွေ အမျိုးမျိုးရှိမယ်ဆိုတာ နားလည်ပါသည်။ တဦးချင်းဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့ အစည်းဖြစ်စေ ကိုယ်တတ်နိုင်သည့် ဘောင်အတွင်းက ကူညီိနိုင်ပါက မုန်တိုင်းဘေးခံရသူတွေရဲ့ အသက်ပေါင်းများစွာကို ကယ်တင်နိုင်လိမ့် မည်။
အဲဒီအတွေးတွေရပြီး အိမ်ကိုဖုန်းပြောပြီး အမေ့ကို ရှင်းပြမိသည်။ ကျွန်မတို့ အိမ်သည် မုန်တိုင်းခံရသော်လည်း စားစရာဆန်ရှိသေးသည်၊ သောက်စရာရေရှိသေးသည်။ ကျွန်မတို့ ရပ်ကွက်မှာပင် တချို့ နေရာတွေရေပြတ်နေသည်။ အမေက ကျွန်မမပြောမှီတည်းက ရေကုသိုလ်လုပ်နေကြောင်း ပြောပြတော့ ကျွန်မအလွန်ဝမ်းသာမိသည်။ အဲဒီလို တဦးချင်းတနိုင်တပိုင် ကူညီသွားလျှင် အတော်ထိရောက်လိမ့်မည်။ ကျေးဇူးပြူပြီး ဒီpostလေးဖတ်ပြီးတဲ့အခါ မိမိအိမ်တွေနဲ့ များအဆက်အသွယ်ရခဲ့ ရင် မိမိအိမ်ကလည်းကူညီနိုင်ဖို့အခြေအနေပေးခဲ့ရင် မုန်တိုင်းဘေးသင့်သူတွေကို ၀ိုင်ဝန်းကူညီကြဖို့နှိုးဆော်ပေးဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါသည်။
သင့်နှလုံးသားဖြင့်အသက်ကယ်ပါpostဖတ်ပြီး ကျွန်မစာရင်းထဲမှာ မပါသည့် လှူဒါန်းနိုင်မည့်နေရာတချို့ ကို emailပို့ ပေးသော သူငယ်ချင်းများ၊ comment့ ပေးသော သူငယ်ချင်းများ၊ donation information postလေးတွေတင်ပေးသောbloggerများကို ကျေးဇူးတင်စွာနဲ့အောက်မှာ စာရင်းအသစ်လေး ထပ်ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
3) For those in SingaporeYou can donate at
1. Lan Pya Kyal @5Flr, Pennisula Plaza
2. Lin Let @2Flr , pennisula plaza
3. Sin Myanmar @3Flr, Pennisula Plaza
4) For those in Singapore and Australia
(Dear all,I am collecting donation for Nagris effected victims inside Burma.I'll donate all collected money to the NGO Save the Children (www.savethechildren.org) ,http://www.savethechildren.org/newsroom/2008/cyclone-nargis-myanmar.htmlI'll transfer the money to my contact persons in Burma who are currentlyworking with this NGO.Pls transfer your money to following accounts if you wish to donate. plsalso drop me email or give meacall after your transfer so that i canconfirm and record it.Alternatively, please donate any other organizations or individuals as youwish inside Burma this time of need.My Bank account detailsIn Australia:Bank: Commonwealth BankSaving Account # : 06 2339 1036 9410In SingaporeBank: Citi BankSaving Account #: 0-471559-008Pls kindly forward this email to others who want to donate.Thank you very much for your generosity.Kindest RegardsZaw Htoo Aung (EcE, Jan-1995)Folowing is my contact detailsHome:Unit 21/ 346,Church Street, ParramattaSydneyNSW2150Mobile: (+61)0434037114email:zawhtooaung@yahoo.comzhtooaung@gmail.com)
5) For those in Canada
6) For those in Australia
8) World VisionDonate by ChequeMake your cheque payable to "World Vision International" and mail to 10 Anson Road #13-08 International Plaza Singapore 079903 Donate by CashPlease visit World Vision Singapore office at 10 Anson Road #13-08 International Plaza Singapore 079903 Donate via Internet BankingDBS Internet BankingStandard Chartered Internet Banking Please select World Vision under list of payee For more information, click hereDonate by ATM Fund TransferDonate by doingaATM fund transfer toDBS Autosave Account
9) For those in Japan
12) For those in England
Posted by တန်ခူး at 11:01 AM6comments:
သူတို့ မှာ နေစရာအိမ် မရှိ…
သူတို့ မှာ သောက်စရာရေ မရှိ…
သူတို့ မှာ စားစရာအစာ မရှိ…
သူတို့ မှာ ပြေးစရာမြေ မရှိ…။
ရုတ်တရက် ပြူတ်ထွက်သွားတဲ့ တွဲလက်တွေ…
အသင့်စောင့်ကြိူနေတဲ့ ရောဂါပိုးတွေနဲ့ …
တေးတေးလေးကျန်နေတဲ့ တန်ဖိုးရှိလှတဲ့သူတို့ အသက်လေးတွေကို
နီးစပ်ရာ လှူဒါန်းနိုင်ဖို့စုစောင်းဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်…
3) For those in Singapore
I am collecting donation for Nagris effected victims inside Burma.
I'll donate all collected money to the NGO Save the Children (
I'll transfer the money to my contact persons in Burma who are currently
working with this NGO.
Pls transfer your money to following accounts if you wish to donate. pls
also drop me email or give meacall after your transfer so that i can
confirm and record it.
Alternatively, please donate any other organizations or individuals as you
wish inside Burma this time of need.
Saving Account # : 06 2339 1036 9410
Saving Account #: 0-471559-008
Pls kindly forward this email to others who want to donate.
Zaw Htoo Aung (EcE, Jan-1995)
Folowing is my contact details
Unit 21/ 346,
Posted by တန်ခူး at 10:14 PM9comments:
12:18AM5May 2008
Posted by တန်ခူး at 12:21 AM7comments: